Atụmatụ 4 iji gbanwee ndị ọbịa ọhụụ ka ha bụrụ ndị na-alọghachi | Martech Zone
Atụmatụ 4 iji tọghata ndị ọbịa ọhụụ na ndị na-alọghachi
Friday, December 18, 2015 Mọnde, Jenụwarị 4, 2021 Douglas Karr
Anyị nwere nnukwu nsogbu na ụlọ ọrụ ọdịnaya. Fọrọ nke nta ọ bụla otu akụ m na-agụ na ọdịnaya ọdịnaya metụtara nweta ndị ọbịa ọhụrụ, na-eru ọhụrụ lekwasịrị ndị na-ege ntị anya, na itinye ego na Emery ọwa mgbasa ozi. Ndị a niile bụ atụmatụ nnweta.
Inweta ndị ahịa bụ ụzọ dị nwayọ nwayọ, nke kacha sie ike, ma dịkwa oke ọnụ nke ịba ụba ego n'agbanyeghị ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụdị ngwaahịa ọ bụla. Gini mere eziokwu a ji furu efu na azum ahia ahia?
Ọ dị ihe dịka 50% dị mfe ịre ndị ahịa dị ugbu a karịa ị nweta atụmanya ọhụụ dịka Metrik Ahịa
A 5% abawanye na ndị ahịa njigide nwere ike dịkwuo profitability site 75% dị ka Bain na Companylọ ọrụ.
80% nke ụlọ ọrụ gị n'ọdịnihu ga-abịa site na 20% nke ndị ahịa gị dị ka Gartner.
Ọ bụrụ na azụmahịa gị na-etinye oge na ume na atụmatụ njigide ndị ahịa, ma ị mata na usoro ịre ahịa ọdịnaya na-eme ka ndị ahịa ọhụrụ pụta, ọ bụghị ihe ezi uche dị na - na njem onye ahịa gị - na inyere ndị ọbịa ọhụrụ gị aka ịlaghachi na ndị ọbịa na-abaghị uru ma ọ bara uru. ma ga-emewanye nnata ego? Ọ bụ naanị ezi uche.
Martech Zone na-aga n'ihu na-eto ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ n'afọ karịa afọ na-enweghị ego na ịzụta ndị ọbịa ọhụrụ. N'ezie, anyị na-ekwu na ọtụtụ uto a bụ mmụba na-aga n'ihu nke ahụmịhe onye ọrụ yana ogo ọdịnaya - mana ụfọdụ atụmatụ anyị na-ebugharị bụ nke elementrịrị na mfe iji mejuputa:
email na ndebanye aha - Na-akwalite akwụkwọ akụkọ gị na ndị ọbịa oge mbụ popups ma ọ bụ ebumnuche ọpụpụ ngwaọrụ. Atinggwa ndị ọzọ akwụkwọ ozi gị wee nyekwa ụfọdụ ụdị ihe agbamume maka ndị ọbịa nwere ike ịchụpụ ezigbo ozi ịntanetị… nke nwere ike bụrụ ndị ahịa ogologo oge ..
Nchọgharị Nchọgharị - Ihe ka ọtụtụ n'ime ihe nchọgharị nwere ike ugbu a na desktọọpụ ificationsma Ọkwa na sistemụ arụmọrụ nke ma Mac ma ọ bụ PC. Anyị ebubatala Ngwọta ngosi nke OneSignal. Mgbe ị rutere na saịtị anyị site na ekwentị ma ọ bụ desktọọpụ, a jụrụ gị ma ịchọrọ ịhapụ ọkwa desktọọpụ ma ọ bụ na ị chọghị. Ọ bụrụ n ’ịhapụ ha, oge ọ bụla anyị bipụtara a na-ezitere gị ọkwa. Anyị na-agbakwunye ọtụtụ ndị debanyere aha kwa ụbọchị na otu narị otu narị na-alọghachi kwa izu.
Ndebanye aha nri - imeziwanye na ichikota a Ọrụ ndenye aha gị gara n'ihu na-akwụ ụgwọ. Ọtụtụ mmadụ kwenyere na ndepụta ndị ahụ anwụọla - mana anyị na-aga n'ihu ịhụ ọtụtụ ndị debanyere aha nri kwa izu na ọtụtụ puku ndị na-agụ akwụkwọ na-alaghachi na saịtị anyị.
Mgbaso na-eso - Ọ bụ ezie na ndepụta ewu ewu belatara, mmekọrịta mmadụ na ibe ya amakaala. N'azụ okporo ụzọ nchọta ihe nchọta, mgbasa ozi mgbasa ozi bụ isi onye nrụtụ aka anyị na saịtị anyị. Ọ bụ ezie na ọ gaghị ekwe omume ịkọwapụta okporo ụzọ dị n'etiti ihe onye ọzọ na-eso ma ọ bụ nke anyị, anyị maara na ka anyị na-etolite na anyị na-agbaso na ozi ntugharị na-akawanye mma.
Njide ndị na-agụ abụghị naanị ime ka ndị mmadụ laghachi. Ndị na-agụ akwụkwọ na-aga n'ihu ịlaghachi, gụọ ọdịnaya gị, ma soro akara gị gafere oge na-achọpụta gị maka ikike ị nwere ma mekwa ka ntụkwasị obi ha nwere na gị bawanye. Ntụkwasị obi bụ lynchpin nke na-eme ka onye ọbịa banye na ndị ahịa ya.
Na Akụkọ gbasara omume Google Analytics, ị nwere ike ilele ya New vs Iweghachi akụkọ. Ka ị na-elele akụkọ ahụ, jide n'aka na ị gbanwee usoro ụbọchị ma lelee bọtịnụ atụ iji hụ ma saịtị gị ọ na-ejigide ndị na-agụ ma ọ bụ na-efunahụ ha. Buru n'uche, n'ezie, na a naghị enwe ike ịkọwapụta olu ebe ọ bụ na nchịkọta Google dabere na kuki kuki ngwaọrụ. Ka ndị ọbịa gị na-ekpochapụ kuki ma ọ bụ si na ngwaọrụ dị iche iche bịa, ha anaghị agụta ha.
N'ime afọ abụọ gara aga, anyị elebara anya n'ihe ka ukwuu na ntinye ego anyị na atụmatụ njide. Ọ arụ ọrụ? Kpamkpam! Visitslaghachi nleta dị elu 85.3% on Martech Zone. Buru n'uche, ndị a abụghị ndị pụrụ iche ndị ọbịa - ndị a bụ nleta. Anyị amụbaala ọnụọgụ abụọ nke ndị ọbịa na-alọghachi n'ime izu 1 izizi gara na saịtị ahụ. Yabụ - ọnụọgụ nke ndị ọbịa na-alọta abawanyela, ọnụọgụ nke eleta kwa onye ọbịa na-alọghachite, na oge dị n’etiti nleta belatara. Nke ahụ bụ ịrịba… na revenue na-arụ ọbụna mma.
Onye ọbịa na-alọghachi nwere ike ọ ga-akpọtụrụ gị na ụlọ ọrụ ị nwere ike ịnyere aka, ma ọ bụ were gị onwe gị. Ọ bụrụ na ị naghị a attentiona ntị na ọnụọgụ nke ndị ọbịa na-alọghachi na saịtị gị, ị na-egbusi nnukwu mmefu ego, ume, na oge.
Tags: akụkọ omumeihe nchọgharịusoro ahia ahiaemailndenye aha nriGoogle Analyticsgoroostọhụụ na nloghachiọhụrụ na-alaghachialanloghachi onye obianloghachi ndi nletaelekọta mmadụ mediaelekọta mmadụ na-esonụdebanyere ahadị mma
Dee 20, 2015 na 3: 48 AM
Na-achọ ụzọ ị ga-esi nwetaghachi ndị ọbịa, mana ọ dabere na niche ọ dị. Na-aga ịnwale ọkwa ihe nchọgharị 🙂
Nov 9, 2016 na 10:23 AM
Akwa isiokwu. Echere m na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-echefu banyere ịga na weebụsaịtị, ọ dị mma ịnwe ụdị usoro ngosi dị ka Akwụkwọ Akụkọ ma ọ bụ ọkwa ihe nchọgharị. N'ezie ezigbo akwụkwọ akụkọ email ochie na-arụ ọrụ nke ọma maka anyị (PressPad).
Bawanye njide ndị ọrụ bụ n'ezie otu ebumnuche anyị mgbe anyị bidoro PressPad News, ngwaahịa anyị maka ndị na-ede blọgụ. Anyị na-ekepụta ngwa ọdịnala maka ha, nke na-agwa ndị ọrụ ọ bụla ọkwa ọhụụ bipụtara, na-eme ka ha dị ọhụrụ ma hụ na ha ga-akpọtụrụ. Kedu ihe ị chere gbasara ụdị azịza a?